10 Best Bakeries ခုနှစ်တွင်ဥရောပကြိုးစားပါရန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 Best Bakeries ခုနှစ်တွင်ဥရောပကြိုးစားပါရန်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 07/06/2020)
မွှေးသွားအတူခရီးသွားများအတွက်, အာရုံစိုက်! သငျသညျမှထင်မစေခြင်းငှါ, ဥရောပတဆင့်သွားလာ ရုံအချိုပွဲထွက်ကြိုးစားနေ၏မျက်နှာကို ထောက်., သင်မူကားသင့်ပါတယ်. ဥရောပနီးကပ်လာသည့်ရန်သင့်အားငါသက်ရောက်စေမည်အချို့စိတ်ကူးခဲဘွယ်စားဘွယ်ရှိပါတယ် ယဉျကြေးမှု သငျသညျရှာဖွေစူးစမ်းနေတိုင်းပြည်. Plus အား, သူတို့သည်သင်၏အရသာဘူးသီးမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်. ကိုခစျြတယျဆိုတာဘာကိုမဖွင့်?
စိတ်ကူးကြိုးစားကြဖို့လုံလောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသံနှင့်သင်ဘယ်မှာစတင်ရန်အံ့သြနေပါလျှင်, ဖဲ့ခြွေဘူး. သင်ဆုံးဖြတ်ကူညီရန်, ကျနော်တို့ကအမွှေးစာရင်းပြုစုပါတယ် 10 ဥရောပရန်သင့်ခရီးစဉ်အပေါ်ကြိုးစားရန်အကောင်းဆုံး Bakeries. သူတို့ကိုတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြပါစို့:
1. အမ်စတာဒမ်, အဆိုပါ နယ်သာလန် - ငါ့ Little က Patisserie
ကောင်းစွာလုပ်ကြုံတွေ့ရဖို့ရှားပါးဒါဟာင် ပြင်သစ်ခဲဘွယ်စားဘွယ် အခြားနိုင်ငံများတွင်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမစိုးရိမ် - ထိုစားတော်ဝန်ပြင်သစ်ဖြစ်ပါသည်. အကြှနျုပျ၏ Little က Patisserie ချိုမြိန်သွားပြင်သစ်ပျော်မွေ့အမျိုးမျိုးတို့ကိုကမ်းလှမ်း, chouquettes နှင့် Eclair အပါအဝင်, သည်အခြားအထူးအကြား.
ရိုးရာပြင်သစ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, အကြှနျုပျ၏ Little က Patisserie ဿုံဒတျချြ setting ကိုအတွက်ပြင်သစ်၏ဝိညာဉ် evokes. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သူတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့မတရားသောကျေနပ်ရန်ပျက်ကွက်ဘယ်တော့မှသောအစဉ်အလာပြင်သစ်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုသုံးပါ. သင်၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေလျှင်ဤအရပ်ဌာနကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့ အမ်စတာဒမ်!
2. ရောမမြို့, အီတလီ - Bakery အိမ်
ဒါကကိတ်မုန့်အခြားထင်ရသောငါး-Out-of-ရေအခြေအနေ, ကအားလုံးကိုအီတလီ pastries အကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်. အစား, အဆိုပါ Bakery အိမ်မယားစကားထဲမှာအထူး, ဖွစျနိုငျကွောငျးတင်းကြပ်စွာအမေရိကန်အကြိုက်ဆုံးတီထွင်မှု ဒါကြောင့်အရသာ သငျသညျစွန့်ခွာချင်ဘယ်တော့မှ.
Bakery အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာအရသာမျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးသက်ဆိုင်ရာနေကြသည်မှာအနည်းဆုံးရှိရာ. သို့သော်ထိုသို့တဦးတည်းမယားစကားကြိုးစားရန်သာမဖြစ်နိုင်ဘူးကတည်းက, သင့်ရဲ့ကမ်းခြေခန္ဓာကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မည်မဟုတ်. သို့သျောလညျး, ဤအမယားစကားဟာကယ်လိုရီကိုချွတ်ရှို့ဖို့အားကစားရုံတစ်ခုအပိုနာရီအနည်းငယ်ဖြုန်းရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်.
3. ရောမမြို့, အီတလီ - Biscottificio Innocenti
သင်တို့အဘို့အတောင့်ဆိုရင် တင်းကြပ်စွာအီတလီ အချိုပွဲ, Biscottificio Innocenti သငျသညျစိတျပကျြမည်မဟုတ်. ဒါဟာအမှန်အကြားနေရာမှထိုက်တန်ပါတယ် 10 ဥရောပရန်သင့်ခရီးစဉ်အပေါ် biscotti ကျေးဇူးတင်ကြိုးစားရန်အကောင်းဆုံး Bakeries. ၎င်းသည်သင်အရသာရှိရှိအကောင်းဆုံးအရသာရှိသောဘီစကွတ်များထုတ်လုပ်သည့်မီးဖိုကြီးတစ်လုံးပါရှိသည် အီတလီမှာကြိုးစားပါ.
သင်ဘယ်နေရာသူတို့အဘို့စာရွက်ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး - Biscottificio က၎င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ရဲ့အမြည်းမှသေချာပါစေ Brutti ma Buoni. ဒါဟာသင်၏လုံလောက်စွာရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းပိရမစ်များကဲ့သို့ shaped တစ်ဦးဘီစကစ်မုန့်ဖြစ်ပါသည်.
4. ပဲရစ်, ပြင်သစ် - မုန့်နှင့်အခြို့သောအကြံပြုချက်များ
ဒီအံ့သြစရာ Parisian ကိတ်မုန့်၏အမည်အဖြစ်ဘာသာ မုန့်နှင့်အကြံပြုချက်များ, တစ်ခုမှုတ်သွင်းခံနာမကိုအမှီအရာဖြစ်ပါသည် ဖှယျအစားအစာ. ထိုသူတို့၏အမည်ဖြင့်မုန့်တစ်ဦးအထူးပြုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စဉ်, သောသူတို့သည်ပူဇော်သမျှသောမဟုတ်ဘူး.
သင်တို့သည်လည်းမိမိတို့၏ croissants ခံစားနိုငျ! ဤရွေ့ကားဖုတ်ကုန်ပစ္စည်းများပဲရစ်မှာအကောင်းဆုံး croissants ဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်သတင်းတို. ဘယ်အချိန်မှာအတွက် ပဲရစ်, ဥရောပအကောင်းဆုံး Bakeries များထဲမှလက်လွတ်မ.
5. မြူးနစ်, ဂျာမနီ - ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုစားသောက်ဆိုင်ကော်ဖီမြန်
မြူးနစ်၏ကလူ သူတို့ရဲ့ pastries ကိုချစ်, နှင့် Konditorei Kaffee Schneller ဘို့သူတို့ရှိသည်မြင့်နှင့် ပတ်သက်. ကနေသိသာင်. သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့တစျဦးဖွစျသညျ 10 သင့်တွင်ကြိုးစားပါရန်အကောင်းဆုံး Bakeries ဥရောပရန်ခရီးစဉ်?
သင်တစ်ဦးငယ်ရွယ်ရွယ် hectic မှတဆင့်လမ်း၌ရှောက်သွားကြပြီးနောက်, အမှောငျကနြနှင့်ပင်ပန်းတယ်တနင်္လာနေ့, သင်သည်သင်၏ဝိညာဉ်များရုတ်သိမ်းပေးရန်ဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်ပါတယ်. သငျသညျမြူးနစ်အတွက်ဆိုရင်, အဖြေကိုအရသာအတွက်တည်ရှိသည်, အိမ်လုပ် pastries. သငျသညျပိုမိုမြန်ဆန်ကော်ဖီအတွက် findthose နိုင်ပါတယ်, တစ်ဦးနှင့်အတူ cappuccino ၏နှစျသိမျ့ပူခွက်ကို သို့မဟုတ်ကိုကိုး. ပိုပြီးမကြာခဏမထက်, သငျသညျမှာအားလုံးကသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဆင်ခြေမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
6. ဇူးရစ်, ဆွစ်ဇာလန် - Conditorei Schober
ဇူးရစ်ဥရောပအကောင်းဆုံး Bakeries ရှာအဓိပ္ပါယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဆွစ် ရှိ အကြီးအချောကလက် ဧကန်အမှန်အသင်သည်အထင်ကြီးမည်ကိုပင်ပိုကောင်း pastry သိမ်းသွားလေ၏. Conditorei Schober သငျသညျအဟောငျးမြို့၏ "ချိုမြိန်ထောင့်" တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Bakeries တစ်ခုဖြစ်သည်.
ဒါဟာရိုးရာ-ရှာဖွေနေင် နည်းနည်းကဖီး သင်တို့ကိုကြိုးစားနိုင်ဆုံးသောအံ့သြဖွယ် pastries နှင့်လက်ဖြစ်ချောကလက်အချို့ရှိပါတယ်. နေချင်စဖွယ်ပုံစံမျိုး, အကြီးအအချိုပွဲ, ရန်နှင့်တစ်ဦးဟင်းလင်းပြင် နွေကာလ၌ပျော်မွေ့ - ချစ်စေခြင်းငှါအဘယျသို့မဟုတ်ပါဘူး?
7. ဇူးရစ်, ဆွစ်ဇာလန် - Confiserie Sprungli
ကျနော်တို့သေးဇူးရစ်နှင့်အတူပြုတော်မယ့်! တဦးတည်းကိုပိုပြီးအရပ်ဌာနဥရောပမှာအကောင်းဆုံး Bakeries များ၏စာရင်းအပေါ်ဖော်ပြထားခြင်းရှိထိုက်သောဖြစ်ပါတယ်. မြို့ထဲတွင်အလှဆုံးကဖီးအဖြစ်မှတ်, Confiserie Sprungli ဇူးရစ်အတွက်အတော်လေးကျော်ကြား.
သူတို့ကိုကျော်ကြားကိုဖန်ဆင်းသောအထူးပြုသည့် Luxemburgli ဖြစ်ပါသည် macaroons, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ချောကလက်အဖြစ်ကောင်းစွာထိပ်တန်းဖြစ်ပါသည်. သူတို့ရဲ့အထူးအားလုံးသင့်ရဲ့အာရုံမနာသီချင်းဆိုစေရန်သေချာ. သင်က Luxemburgli macarons ထွက်ကြိုးစားနေမရှိဘဲ Confiserie Sprungli မစစ်ကြောဘဲနေလို့ရပါတယ်!
8. ဒိန်းမတ်ကိတ်မုန့် - Kaffehuset - ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ်
သင်ကအောင်မှာဘယ်လိုကျွမ်းကျင်ဒိနျးမတျအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲ pastries ဖော်ပြထားခြင်းမနိုင်. ဒါကြောင့်ဥရောပအကောင်းဆုံး Bakeries ကြားတွင်ကိုပင်ဟေဂင်ကနေဒိန်းမတ်ကိတ်မုန့်ကိုရှာအံ့သြစရာမရှိပါရဲ့အဘယ်ကြောင့်ဖွင့်. အဆိုပါ Kaffehuset အရပျမြားအတှကျအဓိပ္ပါယ်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကသူတို့နှုတ်-ရေလောင်း pastries ကျေးဇူးတင်အနိုင်ရ.
ကျောင်းသားများ ကိုပင်ဟေဂင်၏ Kaffehuset ရဲ့မျက်နှာသာ cheesecake, ဒါဟာမြို့ကအများဆုံးကြည်နူးဖွယ်ဆုံးနဲ့အရသာ cheesecake ဖြစ်လူသိများရဲ့အဖြစ်. သငျသညျ၎င်းငျး၏သှေးဆောငျတှနျးလှနျဖို့ကြိုးစားနိုင်, သင်မူကား, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိကျရှုံးလိမ့်မယ် - နှငျ့သငျခဲ့တယျအလွန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်.
9. လန်ဒန်, အင်္ဂလန် - Lauderee
ချိုမြိန်ပြင်သစ်ပျော်မွေ့အပေါ်၎င်း၏အမည်ကိုဖွဲ့သောနောက်ထပ် Out-of-ပြင်သစ်ဥရောပကိတ်မုန့်, Lauderee သငျသညျဗဒေပါလိမ့်မယ်. လန်ဒန်မြို့ဤအရပ်ဌာနကိုကိုးကွယ်, သငျတို့သညျလညျးတခါလိမ့်မည် သငျသညျလန်ဒန်သို့သွားရောက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်.
Macarons ၎င်းတို့၏အထူးများမှာ, သင်သည်သူတို့၏ပြင်သစ် counterparts တွေကိုမထောက်ဘဲသူတို့ကိုပြောပြနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်. သင် pastel-အရောင် shell ကိုအကြပ်အတည်းပြီးနောက် macaron အတွင်းရှိမုန့်သင်၏နှုတ်၌အရည်ပျော်ပါလိမ့်မယ်. ထိုသို့ထက်မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်ရပါဘူး!
10. ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား - Demel
သူတို့ရဲ့ကိတ်မုန့် - Demel အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဗီယင်နာအတွက်ကျော်ကြားအချိုပွဲတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Ana Demal တရားမျှတမှုမရှိခြင်း Demel ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောဂုဏ်သတင်းအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တဲ့ tier ချောကလက် showstopper ဖြစ်ပါသည်.
Demel ့ခရီးသွားဧည့်အကြိုက်ဆုံးထက်ပိုမိုဖြစ်ပါသည် - င်း၏သမိုင်းကျော် 230 နှစ်ပေါင်းတာရှည်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အထင်ကြီးဖြစ်သော. သငျသညျ walnut ကိတ်မုန့်ရှိပါတယ်ပျော်မွေ့နိုင်အထူးအချို့သည်, Esterhazy ကိတ်မုန့်, Sachertorte, နှင့် Dobos ကိတ်မုန့်. တိုတိုပြောရရင်, သငျသညျကိတ်မုန့်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ထိုးရှာနေမယ်ဆိုရင်, Demel ထက်မထပ်မံကြည့်ရှု.
တစ်ဦးမမေ့နိုင်သောရှိသည်ဖို့အဆင်သင့် (နှင့်အရသာ) သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုမိသားစုနှင့်အတူအားလပ်ရက်? ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲမှဥရောပတိုက်တွင်ဆယ်အကောင်းဆုံး Bakeries သွားရောက်ကြည့်ရှု, သငျတို့သလွပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်စီစဉ်ဖို့သေချာပါစေနှင့် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် အချိန်မှန်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 ဥရောပရန်သင့်ခရီးစဉ်တွင်ကြိုးစားပါရန်အကောင်းဆုံး Bakeries ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-best-bakeries-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#bakeries #bakery #deserts #မုန့်ချို လန်ဒန် travelamsterdam travelaustria travelfrance travelgermany netရာဝတီ travelswitzerland